Internet Download Manager 6.25 Build 12 1000% Workind ! Enjoy Full Version (2016) - Min Oaker
internet DownloadMananger Internet Download Manager 6.25 Build 12 1000% Workind ! Enjoy Full Version (2016)
Internet Download Manager 6.25 Build 12 1000% Workind ! Enjoy Full Version (2016)
by Ko Lin on 8:32 AM in internet DownloadMananger
မင်္ဂလာပါဗျာ Internet Download Manager ဆိုတာ ကွန်ပျုတာကို သုံးစွဲ့နေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အရာလေးပါ ။Update ထွက်တိုင်း တင်ပေးနေကျဖြစ်တဲ့ Internet Download Manager ရဲ့ နောက်ဆုံး ဗားရှင်း Internet Download Manager 6.25 Build 12 အသစ်လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Full Version ဖြစ်စေဖို့ကတော့Click နှစ်ချက်ပဲ့ လို့ပါတယ်။Internet Download Manager ကို Install မပြုလုပ်တတ်သူများအတွက်ကတော့ လုံးဝအဆင်ပြေဆုံး ပြုလုပ်ထားပါတယ်။
သာမန် Program တွေ Install လုပ်သလို Double Click နဲ့ Install လုပ်ပေးရုံပါပဲ
Trial Version ကို ထည့်ထားမိလို့ 14 ရက်ပြည့်တဲ့အခါ ဆက်အသုံးပြုလို့မရတော့ပဲ.... ပိုက်ဆံနဲ့ ဝယ်ခိုင်းနေတာမျိုး လုံးဝမဖြစ်ပါဘူး .. Serial Key ၊ Patch ၊ Crack တွေနဲ့ ရှုပ်နေအောင် အဆင့်ဆင့်လုပ်ပေးရတာမျိုးလည်း လုံးဝမလိုပါဘူး....ဘာ Error မှလည်း မရှိပါဘူး.... (1000% Working)
Windows XP ကနေ Vista /7/ 8 / 8.1 / Window 10 အထိနဲ့ 32Bit မှာရော 64Bit မှာပါ Support လုပ်ပါတယ်...
==>Uninstall IDM old version.
==>Run as Admin to setup file.
==>No need crack (or) reg (or) serial.
အဆင်ပြေကြောင်း 1000% အာမခံပါတယ်... :)
ဘယ်လို Install လုပ်ရမှန်း မသိသေးရင် အောက်မှာ Video နဲ့IDM နဲ့ ပါတ်သက်တာမှန်သမျှ အစ မှ အဆုံး သေချာ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။
By Ko Lin at 8:32 AM